Wasiirada PUNTLAND oo maanta laga mamnuucay in ay tagaan MUQDISHO - Caasimada Online
Home Warar Wasiirada PUNTLAND oo maanta laga mamnuucay in ay tagaan MUQDISHO
Wasiirada PUNTLAND oo maanta laga mamnuucay in ay tagaan MUQDISHO
Garoowe (Caasimadda Online) – Wasiirka Warfaafinta Puntland Cabdi Xirsi Cali (Qarjab) ayaa faah faahin ka bixiyay tallaabadii lagu joojiyay kulan uu magaalada Garowe ku qaban lahaa Wasiirka Qorsheynta Xukuumadda Soomaaliya Jamaal Xasan Maxamed.
Waxaa uu sheegay in sababta ay tahay in maamulka Puntland ay xiriirka u jareen dowladda Dhexe ee Soomaaliya,islamarkaana ay muhiim tahay in la dhaqan geliyo Go’aankii Madaxda Maamul goboleedyadda.
Qarjab ayaa sheegay in Wasiiradda Puntland aysan tagi karin Magaalada Muqdisho,islamarkaana aysan la shiri karin Madaxda dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Xiriirka dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ayaa xumaaday tan iyo wixii ka dambeeyay shirkii magaalada Kismaayo lagu soo gaba gabeeyay bishii September ee sanadkan, xilligaasi oo mamul goboleedyada ay sheegeen inay hakiyeen wada shaqeyntii ay la lahaayeen dowladda dhexe.
Halkaan hoose ka dhageyso hadalka Wasiirka Warfaafinta Puntland